Waa maxay Farqiga u dhaxeeya Mucaaradnimada iyo qaran-dumisnimada? - Diblomaasi
Related Topics:Waa maxay Farqiga u dhaxeeya Mucaaradnimada iyo qaran-dumisnimada?
Su’aal isweydiin mudan, Mareykanka ma dal dimuqraadi ah baa?
Duufaantii weerarka aqalka Capitol ee isbuucii la soo dhaafay taageerayaasha Trump weerareen kuwaas oo ka soo horjeeday guushii madaxweynaha cusub Joe Biden ayaa noqotay dhacdo taariikhi ah oo ay dunida la yabeen heerka ay marayso dimuqraadiyada Mareykanka.
Muddooyinkaan oo dhan dalka Mareykan waxaa ka jirtay qalallaaso siyaasadeed oo xagga doorashooyinka iyo cunsuriyada, lagana yaabo in Mareykanka uu noqon waayo dalkii la yaqaanay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu si gaar ah ugu eedeeyay “dadka Antifa” inay weerareen Xarunta Mareykanka Arbacadii la soo dhaafay, in kasta oo fiidiyoow cad iyo dukumentiyo ay muujinayaan in rabshadaha dhacay ay taageerayaashiisu ahaayeen, sida ay werisay shabakadda Axios.
Sug waxyar, waa kuma Antifa?
Antifa, oo loo soo gaabiyo anti-fascist. Antifa waa garabka bidix ee ka soo horjeedda fashiistaha iyo cunsuriyadda Mareykanka. Waa kooxo madax-bannaan oo ujeedkoodu yahay inay ku guuleystaan ujeedooyinkooda iyagoo adeegsanayo ficil toos ah oo aan rabshad lahayn halkii ay adeegsan lahaayeen dib-u-habeyn siyaasadeed.
Inta badan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Antifa waa mid aan rabshad lahayn, oo ku lug leh olole waraaqado, isu gargaarid, jeedinta khudbado, socod dibad bax, iyo isu abaabulida bulshada. Waxay sidoo kale ku mashquulaan xeelado mudaaharaadyo ah, iyagoo doonaya inay la dagaallamaan fashiistayaasha iyo cunsuriyiinta sida neo-Nazis, madax-bannaanida caddaanka, iwm.
Waxayna kaga duwan yihiin dhaqdhaqaaqyada kale ee mucaaradka bidix iyagoo doonaya inay si toos ah ula dagaallamaan dhaqdhaqaaqayaasha midigta-fog, iyo qaar ka mid ah kiisaska fulinta sharciga. Waxayna ku lug yeelan kartaa dhaqdhaqaaqa dijitaalka ah, dhibaataynta, rabshadaha jireed, iyo waxyeelada hantida ee loo geysto kuwa ay u aqoonsadaan inay ka tirsan yihiin midigta fog.
Trump ayaa hadalkaan ka sheegay 30-daqiiqo oo lagu daray taleefan subaxnimadii Isniinta isaga iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee aqalka Kevin McCarthy, Axios ayaa soo warisay, isagoo soo xiganaya sarkaal ka tirsan Aqalka Cad iyo ilo kale oo la yaqaana.
Si kastaba ha noqotee, McCarthy wuxuu u sheegay Trump wicitaankiisa, oo sida Axios sheegay uu ahaa mid kacsan oo dagaal ah mararka qaar, “Ma ahan Antifa, ee waa MAGA [taageerayaasha Trump]. Waan ogahay. Waan joogay. ”
McCarthy ayaa sidoo kale kula taliyay Trump inuu waco Joe Biden, lana kulmo madaxweynaha la doortay isla markaana uu warqad soo dhaweyn ah ugu dhaafo miiska loo yaqaan Resolute miiska dhaxalka, sida lagu sheegay warbixinta. – Laakiin Aqalka Cad si dhakhso ah ugama jawaabin. Wakiilka McCarthy isla markiiba lagama helin faallo kale oo dheeri ah.
Waxaa isweydiin mudan, Mareykanka ma dal dimuqraadi ah baa?
Martin Luther King Jr wuxuu socod ka soo bilaabay Selma ilaa Montgomery, Alabama, 1965 isagoo ka mudaaharaadayay isku dayga ay sameeyeen xildhibaano cadaan ah oo ka socda koonfurta si looga hortago Afrikaanka Mareykanka inay wax doortaan. Waqtigaas, dadka madow waxay ka tiro badnaayeen dadka caddaanka ah ee ku nool Selma laakiin waxay ka koobnaayeen kaliya 2% liiska codbixinta.
In ka badan 50 sano kadib, ina adeertiisa, Christine Jordan, oo markaa jirtay 92 sano, ayaa ka soo muuqatay goobta codbixinta ee Atlanta, Georgia, si ay u codeeyso doorashada xilliga dhexe ee 2018, laakiin waxaa loo sheegay inaysan jirin wax diiwaan ah oo diiwaangelinta cod-bixiyaha ah.
“Waa wax laga naxo, waxay gurigeeda ku qabatay shirar ku saabsan xuquuqda madaniga ah wax diiwaan ahna kamay haynin,” Jessica Lawrence, ayeeyadeed, ayaa tiri waqtigaas.
In kasta oo Mareykanku ku faano qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah, iyo xaqa codbixinta ayaa lagu qeexay mabaadii’da aasaasiga ah ee dimoqraadiyadeeda, waxaa jira cadeymo isa soo taraya oo muujinaya isku dayo nidaamsan oo looga hortagayo tirada sii kordheysa ee Mareykan ah oo awoodo in ay codeeyaan, hadana aan codeeynin.
Martin Luther King iyo xaaskiisa Coretta Scott King ayaa hogaaminaya socodka lagu doonaayey xuquuqda codbixinta ee dadka madow waxay socodkooda kasoo bilaabeen Selma, Alabama, ilaa caasimada gobolka ee Montgomery.
Sawirka: William Lovelace / Getty Images
Halganka loogu jiro xaq u lahaanshaha codbixinta Mareykanka wuxuu jiray illaa inta uu jiray dalka Mareykanka. 1789, ansaxinta dastuurka kadib, codbixinta waxaa loo kordhiyay oo keliya ragga caddaanka ah, ee milkiyadda leh. Ka dib markii la tirtiray addoonsigii qarnigii 19aad, dadka madow waxaa loo oggolaaday inay wax doortaan, laakiin muddo gaaban ka dib markii siyaasiyiinta madow ay bilaabeen inay ku guuleystaan doorashooyinka, aqlabiyadda caddaanka ah waxay bilaabeen inay xayiraan xayiraado la mid ah kuwii dhiirrigeliyey socodkii Martin Luther King ee Selma.
Isbarbardhigyada caalamiga ah waxay muujinayaan sida xaddidaadda codbixintu ay nabar ugu tahay dimuqraadiyadda Mareykanka. Australia gudaheeda, codbixintu waa qasab. Iswiidhan dhammaan codbixiyaasha si otomaatig ah ayey isu diiwaan geliyaan Labada qaranba waxay ku kala sarreeyaan “tixraaca doorashada” oo ay soo saareen aqoonyahanno ka tirsan Jaamacadda Harvard iyo Jaamacadda Sydney.
Hase yeeshe, halkii lagu qiimeyn lahaa dimoqraadiyadaha kale ee waaweyn ee reer galbeedka, Mareykanka ayaa hoos uga dhacaya liistada iyadoo ay wehliyaan waddamo ay ka mid yihiin Kosovo iyo Romania.
Sarah Repucci, oo ah agaasime sare oo ka tirsan Freedom House, oo ah machad ka shaqeeya Washington DC, “waa farsamooyinka lagu bartilmaameedsado cod-bixiyayaasha laga tirada badan yahay (inta badan madow), oo ay soo saareen dowlad-goboleedyada ay maamusho Jamhuuriyadda. Dalalka bartilmaameedsaday codbixiyaasha laga tirada badan yahay waxaa ka mid ah Cameroon, Kosovo – ma ahan maamulo ay Mareykanku u qaadan karaan inay yihiin asaaggeena. ”
Qalallaasadaha siyaasadeed ee wakhtigaan waxay ka dhalatay doorashada Mareykanka, madaxweynaha laga guulaystay sida ay sheegeen ayaa yiri doorashada waa lagu shubtay ee la igama guulaysanin waliba asigoo cadeyn u haynin.
Mareykanka waxaa ka taagan dood xooggan oo ku saabsan qaabka loo codeynayo, iyadoo arrintaas laga gudbiyay boqollaal dacwado ah oo horseeday eedeymo ku saabsan in caburin lagu hayo codbixyeyaasha doonaya inay ka qeybgalaan doorashada madaxtinimo ee Mareykanka.
Safafka, sharciyada xaddidayo codeynta iyo in la tago goobaha codeynta, tallaabooyinkaas dhammaan waxay horseedeen in dadka laga hor istaago inay ka qeyb qaataan hannaanka dimuqraadiyadeed, sida ay sheegeyso Andrea Hailey oo ah agaasimaha ha’yad safamal oo la yiraahdo Vote.org, taas oo dadka ka caawisa inay ku codeeyaan teknooloojiyadda.
Tallaabooyinka ka dhashay ka hortagga cudurka si dad badan aanay isugu tegin xarumaha doorashada, waxay ka dhigan tahay in dad badan oo Mareykanka u dhashay ay xilli hore toos u codeeyaan ama boostada ay codkooda ku dhiibtaan, balse ma noqon doonto in qof kasta uu codeyn doono.
Weerarkii dhismaha Capitol ee usbuucii la soo dhaafay oo ay taageerayaasha Donald Trump ku qaadeen xaruntaas ayaa daahisay shahaado guddoonsiinta guusha doorashada ee Joe Biden.
Donald Trump, oo aan haysan caddayn ayaa ka horyimid ansaxnimada doorashada Joe Biden, markii hore wuxuu ammaanay taageerayaashiisa laakiin markii dambe wuu cambaareeyay rabshadaha. – Wakhtigii uu dhacaayey weerarka, siyaasiyiinta ku jiray aqalka la weerary ee Capitol ayaa lagu qasbay inay cararaan maaddaama dhismaha ay ku buuqeen taageerayaasha madaxweynaha, oo hareeyay ciidammada amniga.
Shan qof ayaa ku dhimatay rabshadaha ka dhacay halkaas, oo uu ku jiro hal sarkaal oo ka tirsan Booliska Capitol oo la garaacay isagoo isku dayaya inuu ka celiyo dadka.
Antifa waxay bartilmaameed u ahayd muxaafidiinta Mareykanka, oo uu ka mid yahay Donald Trump.